Ra’iisul Wasaare Rooble ma joojin doonaa ciidanka laga soo wado Eritrea inta ay ka dhamaaneyso doorashada? | dalkaan.com-Wararka ugu danbeeyay ee soomaaliya
Home Warkii Ra’iisul Wasaare Rooble ma joojin doonaa ciidanka laga soo wado Eritrea inta...
Muqdisho (Dalkaan.com) – Mucaaradka Soomaaliya ayaa walaac xoog leh ka muujiyey ciidan si sare loo tababar oo ka imaanaya wadanka eritrea. Ciidankaan oo la sheego in qaar ku dhinteen dagaalkii Gobolka Tigreega ee Woqooyiga wadanka Itoobiya ayaa intooda badan dhawaan lagu soo celi doonaa magaalada Muqdisho, sida uu yahay qorshaha Madaxweyne Farmaajo.
Deg deg Mahadi Guuleed oo ka Guuleystay Musharax indha shareer...
Mucaaradka oo dagaalkii uga baxay gudoomiye Cabdixaashi. Maxaa sababay arrintaas ?
Daawo: Muxuu Faroole ka yiri is-mari waaga shirka Xamar?